Global Voices teny Malagasy » Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Gabriela Garcia Calderon · Global Voices teny Malagasy » Print
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Gabriela Garcia Calderon
Voadika ny 12 Marsa 2017 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Nandika (fr) i Suzanne Lehn, Miranah
Sokajy: Fifidianana, Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV
(Fanamarihana : Ity andiana lahatsoratra ity dia mikasika ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny tranonkala isan-karazany ato amin'ny Global Voices, antsoina izy ireo mba hifidy ny solontenan'izy ireo hiasa mandritra ny 2 taona ao amin'ny Filan-kevi-pitantanan'ny fikambanana)
Araka ny efa novakianao tamin'ny lohatenin'ny lahatsoratra, Gabriela Garcia Calderon no anarako. Notendrena ho kandidà solontenan'ny tonia aho amin'ny fifidianana Filankevi-pitantanana ato amin'ny Global Voices.
Mpisolovava Peroviana aho izay nahita ny faharatsian'ny miady amin'ny mpitantsoratry ny fitsarana hijery dosie iray fotsiny. Tahaka ny hoe dokotera miady amin'ny mpanampy mpitsabo mba hamela azy hizaha marary iray!
Ary tamin'izany no nidiran'ny Global Voices teo amin'ny fiainako, zava-baovao izay nanova ahy tanteraka … ary mino aho fa torak'izany koa ny GV
Nanomboka ho mpandika lahatsoratra an-tsitrapo amin'ny teny Espaniola  aho tamin'ny Novambra 2007, ary nasain'i Eddie Avila, tonian-dahatsoratra Amerika Latina aho tamin'ny Novambra 2009 mba handray anjara ihany koa ho mpanoratra an-tsitrapo . Ankoatra izany, nanampy an'i Eddie, talen'ny Rising Voices ankehitriny amin'ny tetikasa Amazonia aho.
Nisolo an'i Silvia Viñas, toniam-paritra taloha taty Amerika Latina aho nandritra ny fialan-tsasatra noho ny niterahany tamin'ny Desambra 2012 hatramin'ny Febroary 2013. Herintaona taty aoriana, voatendry ho toniam-paritra vonjimaika aho rehefa nanaiky asa tany ivelany i Silvia; ary nandritra ny valo volana izany.
Ankehitriny, telo volana izay, izaho no tonian'ny Lingua Espaniola, fanamby lehibe izany taorian'ny fe-potoam-piasan'ny teo alohako naharitra ela dia ela.
Hitanareo, efa ela ela ihany aho no tato . Ankoatra izany, mino aho fa anisan'ny mpandray anjara manana lahatsoratra betsaka nivoaka, zara raha ambany kelin'ny 8.000 hatreto… ary mbola mitohy izany!
Iray amin'ireo mampiavaka ahy: tsy manana kaonty Facebook aho. Araka ny hitanao, tsy ilaina ny manana fisiana eo amin'ny tontolo antserasera. Saingy mazoto mibilaogy amin'ny teny Espaniola aho, no sady mpikambana ato amin'ny GV no mavitrika amin'ny kaonty Twitter  ihany koa. Mbola manohy ny lalàna aho, saingy amin'ny fisoloam-bava, tapitra ny disadisako amin'ireo mpitantsoratry ny fitsarana rehefa hijery dosie !
Saingy aoka izay ny fanandratan-tena. Izay tianareo fantarina momba ahy, no ho ataoko ho anareo raha lany aho.
Chenille tamin'ny Vovonana GV 2015 tao Cebu.
Mba hanombohana, ny fijoroako tao hatry ny ela no nahafahako mahafantatra avy ao anatiny ny fomba fiasan'ny GV. Tsy vitany hoe fantatro ny fandehany, fa niainana ihany koa ireo fanovana marobe nolalovantsika tao amin'ny fikambanana. Zatra ny fihetseham-pon'ny mpikambana ato amin'ny GV aho, ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy ireo tonia ihany koa ary afaka maneho izany satria nandalo tao ihany koa aho.
Vonona aho hanome feo manokana ho an'ny rehetra, miaraka amin'ny fihazonana tsiambaratelo mety takian'ny toe-javatra sasany. Raha ho fidianareo solontenan'ny tonia aho, afaka matoky ianareo fa hanao izay azoko atao aho mba hahay hitantana tahaka ny taloha nandritra ny sivy taona sy tapany: miaraka amin'ny Global Voices ato am-poko, sy ny fihetseham-pon'ireo mpikambana ato amin'ny GV ao an-tsaina sy ny fanoloran-tena rehetra mendrika ho an'ity fiarahamonina manandanja amiko ity.
Tiako ny miteny hoe Mahafinaritra ny Global Voices !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/12/96673/
 nanova ahy tanteraka: https://community.globalvoices.org/2014/11/seven-years-and-counting/
 mpandika lahatsoratra an-tsitrapo amin'ny teny Espaniola: https://es.globalvoices.org/author/gabriela-garcia-calderon-orbe/
 mpanoratra an-tsitrapo: https://globalvoices.org/author/gabriela-garcia-calderon/
 efa ela ela ihany aho no tato: https://community.globalvoices.org/2014/12/the-many-hats-of-gabriela-garcia-calderon/
 mazoto mibilaogy : http://seisdeenero.blogspot.com/